10 izibuyekezo brilliant Apple kufanele ucabangele i-iPhone 7 - Izindaba Rule
10 izibuyekezo brilliant Apple kufanele ucabangele i-iPhone 7
A wireless ukushaja isici unikeza amafoni nge esingaphansi 20% ukusetshenziswa umfutho okuncane nje lapho eyaphonselwa ngodonga - ephelele lezo onenkinga yentukuthelo!
Lesi sihloko osesikhundleni “10 izibuyekezo brilliant Apple kufanele ucabangele i-iPhone 7” lalotshwa Thomas Batten, ngoba theguardian.com ngoLwesihlanu 8th January 2016 16.41 UTC
Kuleli viki, okuthi Apple, emshikashikeni walo neverending for phone sleeker, kuba ditching indinganiso 3.5mm ngehedfoni jack in the iPhone oluzayo 7 Uthumele abanye abasebenzisi uxokozele. Lost in umsindo elimhlophe headphones buzz, Nokho, kukhona nezinye izindawo eziningana lapho izibuyekezo ngokulinganayo brilliant namahemuhemu futhi ngcono iPhone.
impilo yebhethri olwandile kufanele kwenzeke iPhone 7 abasebenzisi ukwenza amaningi njengoba ezimbili izingcingo phakathi amacala, futhi wireless ukushaja isici eside elindelwe uyonika amafoni nge esingaphansi 20% ukusetshenziswa umfutho okuncane nje lapho eyaphonselwa udonga.
screen The iPhone 7 kubonakala kuye ithuthukisiwe kangangokuthi ngeke chitha nakavele nowesivunguvungu kungelutho, nakuba Blogger zihlukaniswe phezu kahle kangakanani kwesikrini entsha eziyokwazi ngokumelene ipheshulwa.
Ikhamera ngokuphelele olubukeziwe uyoletha entsha esakhelwe ngaphakathi, ehlunga Instagram aphefumulelwe, njengaleso umuntu bazilungiselela ekufezeni abasebenzisa ukuphola zokusebenza like Tinder ukuthi ithambisa ekhathazeke kakhulu emehlweni abasebenzisi 'lapho snap wedwa.
Abanye bakholelwa ukuthi imithombo Apple ihlela ukuba ngilidlulisele hip audiophiles ukukhulula elinganiselwe edition ngokutholakala nekhophi eyodwa ye-iPhone 7 on vinyl. Beloved usomabhizinisi American Martin Shkreli is namahemuhemu kufanele sibe nesithakazelo kokuyithenga.
The iPhone 7 plus izoba egunjini entsha kufihlwe afakwa emuva zedivayisi enkulu ngokwanele ukuba ubambe ama-phakethe ama amathathu Taco Bell Fire sauce, nakuba amaphakethe iyokwenziwa ithengiswe ngokwehlukana, tech wangaphakathi zembula.
amawebhusayithi eziningana esikisela kuyoba ngcono ezintsha ukuze isistimu yokusebenza Siri ezokwenza adidiyele okuningi ezingcono ukuqashelwa izwi ubuchwepheshe ukuze Siri uzokwazi ukuqaphela lapho kokusongelwa base ulungise wakhe ithoni ngokujwayelekile uyazigqaja ukuba omunye wheedling ingratiation.
A retooled ngokuphelele Apple Maps kuzosiza abasebenzisi bagweme imizila ezaziyobenza useduze ezindaweni lapho avowed Donald Trump abasekeli engaphezu kwemibili kuphela selibuthile.
Kuyamangaza, liye labika ukuthi uma ufaka 7s ezimbili iPhone ebhokisini ndawonye ubusuku futhi imiswe ukuba ukudlala Hits Al Green SikaNkulunkulu Esikhulu Kunazo Zonke, uzothola i-iPhone 7S mayelana izinyanga eziyisishiyagalolunye kamuva.
Ukuze kubasebenzisi Kweminyaka, iMessage siqanjwe kabusha "Uqinisile, nguwe kuphela othola it futhi uku kanjalo, kwesokudla kanjalo. "
Mhlawumbe iningi excitingly, sekuyi konke kodwa ukuqinisekisile ukuthi iPhone ngamunye 7 kuyofika ngohlamvu abhalwe ngesandla kusukela komunye zezintandane Chinese owakha idivayisi, esiqinisa ukuthi bathokozela okwenza kube nokuthi akufanele ukhathazeke noma uzizwe kunoma imuphi umuzwa wecala.
23014	2 I-Apula, Isigaba, Computing, Izici, Instagram, iPhone, Omakhalekhukhwini, Smartphones, Technology, Thomas Batten
← ukwelashwa Alzheimer nabasondelene ubuchopho ukuvuvukala ibonakaliswa key Oculus Rift: isengezo engokoqobo-earphone we-Facebook sika lapha →